कुनै पनि लाइन लेख्न र गेस्टबुक तल आफ्नो चिन्ह छोड्न स्वागत.
गेस्टबुक Holm जिल्ला सबैभन्दा-भ्रमण पृष्ठ को आगन्तुक तथ्याङ्क अन्तर्गत छ. तर, यो पनि अक्सर कसैले केही लेख्छन् छ. आफ्नो आवाज उठाउनु!
एक अभिवादन छोड्न वा के तपाईं मनमा छ केहि सोच्न भन्न!
0 मा "विचारगेस्टबुक”
बन्दूक Lundgren मा 12 जुन, 2016 मा 13:51 भने:
सम्म विद्यालय सुरु जन्म Holmbo आवास Östbyn रूपमा, म Holm गर्न तातो थाहा. अझै पनि गाउँमा साथीहरू र परिचितहरू छ र म त्यहाँ पुग्दा यो घर जस्तै महसुस. गन देखि अभिवादन.
रकेब्ली विद्रोही Sundsvall मा 30 सक्छ, 2015 मा 19:26 भने:
नमस्ते. Holmbygden. बस गृष्म को बीच भेट्नुहोस् यस वर्ष हुँदैन भनेर जोड गर्न चाहनुहुन्छ. दुःखको कुरा हो जस्तो हुन सक्छ. तर ती जब जो धब्बा संग केहि ड्राइभिङ गर्नुपर्छ, र पनि कुराहरू बारे झूठ, Ord.vakter बेट, भाव, आदि. त्यसपछि हामीलाई बरु गृष्म को बीच भेटघाट Graven..Rockabilly विद्रोही उपस्थित गरौं .
झुक्याउन / झटका कुनै पनि .Därmed हामी हाम्रो लागि धन्यवाद र आशा छ कि तपाईं हामी गर्न प्रयास गरेका थिए के भन्दा राम्रो काम गर्न सक्छ कि यस जिल्लामा अरू केही प्राप्त गर्न सक्छन् इरादा कहिल्यै
इमानदार अभिवादन ओ प्रकारको
रकेब्ली विद्रोही Sundsvall
हामी पनि तिनीहरूलाई धन्यवाद2थिए मौसम .
Holmbygden.se मा2जुन, 2015 मा 23:22 भने:
Hej अल्ला रकेब्ली विद्रोही,
यो हाम्रो सङ्गति धेरै नीरस थियो (!) Holm मा केहि गृष्म को बीच भेट्नुहोस् छ यो बारेमा सुन्न. आफ्नो कहानी सुन्न दुःखी. अन्यथा, यो एक धेरै व्यवस्था र आनन्द को देहात सबै आगन्तुकहरूलाई संग iniative सराहना थियो.
तपाईं तल राख्न सबै काम को लागि धन्यवाद!
Holm जिल्ला का विकास
लीना Näslund मा 15 अप्रिल, 2015 मा 18:14 भने:
नमस्ते! म अस्थायी रूपमा गाउँमा यहाँ बाँच्न र आभूषण विनिर्माण
र अरू साना जो कोहीले भ्रमण रुचि हा थियो? जो कोहीले थाहा
प्रत्येक एक उदाहरणका एक रात पकड सक्छ? भवदीय लीना superlina84@hotmail.com
Sören Olofsson मा 14 डिसेम्बर, 2013 मा 12:36 भने:
Holm देखि सबै जानकारी को लागि धन्यवाद!
Holmbygden.se मा 16 डिसेम्बर, 2013 मा 10:01 भने:
धेरै लामो-दूरी अतिथि मूल्यांकन सुन्न र हाम्रो साइट भ्रमण हास्यास्पद!
कार्ल Blomberg मा 26 अप्रिल, 2012 मा 08:30 भने:
ठूलो वेबसाइटमा बधाई!
अब तपाईं पनि यूआरएल, उदाहरणका लागि, संकेत द्वारा Holm जिल्ला सबै प्रविष्टि अंक मा विज्ञापन गर्नुपर्छ.
Holmbygden.se मा 26 अप्रिल, 2012 मा 14:35 भने:
हो, विचार हामीलाई प्रहार गरेको छ. हालसम्म तथापि, कुरा कुनै प्रकारको गरे – पनि कसैले गरेको हुन जागिर… हामी मद्दत गर्छ कि सबै आफूलाई बजार सम्म खुसी छन्, हालसम्म यो ल्याउनुभयो र सामान्य मा इन्टरनेट मार्फत मात्र फैलाउन किनभने.
सुझाव को लागि धन्यवाद!
स्केन मा पत्रुस Lindeberg मा6फेब्रुअरी, 2012 मा 11:45 भने:
यो Holm जिल्ला बाट नयाँ इन्टरनेट साइटमा Ulla Lindenberg एक इमेल प्राप्त गर्न ठूलो थियो. लेखन मा नयाँ समाचार पुजारी कार्ल-Heinrich Smuzzler देखि अन्यथा मेरो लागि stems (हिज्जे बहाना) उहाँले fastidiously को facile मूल्यहरु संग पत्र शुरू गर्दा “Nix PiX” र “कोस्टा फ्री”. पातहरु सम्पूर्ण जिल्ला बारेमा पढ्न धेरै राम्रो थियो. तसर्थ, म मेलहरू यी धेरै प्रकारका गर्न तत्पर.
म अब सदस्यहरू सामेल एक ठूलो साइट को लागि धन्यवाद.
पत्रुस Vikholms देखि म Anundgård डेटिङ
ROLAND Hultman मा 12 जनवरी, 2012 मा 08:56 भने:
बस नगरपालिका बाहिर केन्द्रीय भागमा भइरहेको छ के पढ्ने एक ब्रेक रूपमा मेरो तत्काल सेरोफेरो मा भइरहेको छ के पढ्न सधैं आनन्द.
रुचि हो जसले तपाईंलाई गर्न Kudos हाम्रो लागि यो व्यवस्थापन गर्ने, तपाईं यो पूरा गर्न आवश्यक सहयोग प्राप्त आशामा.
Holm जिल्ला म भन्दा मेरो थप समयमा मा भएको छु भन्दा राम्रो ठाउँ छ 60 – वर्ष जीवन हालसम्म र हुनेछ शायद त्यसैले रहने….
Niklas मा 30 नोभेम्बर, 2011 मा 18:41 भने:
तपाईं देहात यहाँ हाम्रो लागि तल राख्न सबै काम को लागि धन्यवाद HBU! =)
#31 नयाँ गेस्टबुक सुविधा परीक्षण =)
Stor risk för gräsbrand i snöfria områ... थप पढ्नुहोस्